Soo dejisan Fotosizer 2.09.0.548 – Vessoft
Soo dejisan Fotosizer
Fotosizer – software ah in ay la shaqeeyaan faylasha sawiro qaabab kala duwan. Fotosizer awood u tahay in la beddelo balladhka iyo dhererka size file saarka ee standart ama Dufcaddii hababka. Software waxay bixisaa qaab beddelidda faylka ku haboon oo si degdeg ah oo ka mid ah qaab kale, goob tayada diinta, shaandheyn images jihada u socoto ah iyo codsiga ee saameynta kala duwan. Fotosizer kuu ogolaanaya in aad ku kaydsan wax warbixin dheeraad ah oo ku qoray ee images lagu jiro qaab beddelidda. Fotosizer isticmaala tirada ugu yar ee khayraadka nidaamka iyo waxa uu leeyahay si fudud aad ku isticmaasho interface.
Diinta Fast faylasha graphic
Badashaa size ee images in hab Dufcaddii
Settings tayada faylasha lagu jiro isku beddelka ah
Codsiga ah saamaynta kala duwan
Saves macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan image ka
Fotosizer Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... Avant Browser 2016 build 7 Standard iyo Ultimate